August 2021 - Puntland Mirror Believable Media Website
August 30, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa manta oo Isniin ah 10-sanno oo xabsi ah ku riday Cabdisamad Ibraahim Cumar, oo ahaa sawirqaadihii maleeshiyada ISIS/Daacish. Cabdisamad oo kasoo jeeda deegaanka Garissa ee dallka Kenya […]
August 29, 2021 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Axad ah taageero milatari ku wareejisay maamulka Galmudug kuwaasoo dagaal kula jira maleeshiyada A-Shabaab. Taageerada ayaa ahayd hub iyo gaadiid, sida uu ku sheegay qoraalo mahadcelin ah uu […]
August 11, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Dowladda Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah doortay 11 xubnood kuwaasoo aqalka sare ee Soomaaliya ku matalaya Puntland. Saddex kamid ah xubanaha la doortay ayaa ah haween, taasoo ka dhigaysa in Puntland […]
August 10, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa soo saaray liiska 22 musharax oo u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday madaxtooyada subaxnimadii Talaadada. Intooda badan […]
August 8, 2021 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiiradda Arrimaha Dibada Kenya Raychelle Omamo ayaa maanta oo Axad ah timid magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Wasiiradda ayaa la filayaa in ay kulamo la yeelato masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya kadib markii labada dal […]
August 4, 2021 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland (TPEC) ayaa maanta oo Arbaco ah baahisay liiska kama dambeysta ah ee codbixiyeyaasha doorashooyinka hordhaca ah ee dowladdaha hoose. 46,839 cod oo sax ah oo iska-diiwaangelisay saddexda […]